လက်သီးထိုးခြင်း၊ ဘောလုံးမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာ (Blunt Trauma) – Healthy Life Journal
လက်သီးထိုးခြင်း၊ ဘောလုံးမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာ (Blunt Trauma)
ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
မေး. မျက်စိကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတဲ့အခါ၊ ဘောလုံးမှန် တဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. မျက်လုံးအိမ် (Eye Ball)က အပိတ်စနစ် (Close System) ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးအိမ်ရဲ့ဘေးမှာ အရိုးပတ်လမ်းကြောင်း (Bony Orbit) ရှိတယ်။ မျက်လုံးအိမ်နဲ့ အရိုးပတ်လမ်းကြောင်းကြားမှာ အဆီ (Fats) တွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီအဆီတွေက ကူရှင်သဘောမျိုး မျက်စိကို ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ မျက်စိကို လက်သီးနဲ့ထိုးမိရင်၊ ဘောလုံးမှန်ရင်တောင် မျက်စိထဲကို ဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်တဲ့အားက နည်းနည်းတော့ နည်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအားကြောင့် မျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြော (Vessels)တွေကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေက သူငယ်အိမ် (Iris)၊ မျက်စိအမြင်လွှာ (Retina)နဲ့ Choroid တို့မှာ များပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေက သွေးကြောတွေအားလုံးက သွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။ သွေးတွေက စိမ့်ထွက်လာပါတယ်။
မျက်စိထဲမှာ အခန်း (Chamber)က နှစ်ခန်းပဲရှိပါတယ်။ Anterior Chamber နဲ့ Vitreous Cavity ဆိုပြီး နှစ်ခန်းရှိပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြောင့် သွေးစိမ့်ထွက်တဲ့အခါ Anterior Chamber မှာ သွေးတွေနဲ့ ပြည့်လာတယ်။ အဲဒါကို Blood in the Anterior Chamber လို့ သတ်မှတ်ပြီး Hyphema လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မေး. နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. Anterior Chamber တစ်ခုလုံးမှာ သွေးတွေအပြည့်ဖြစ်နေရင်တော့ ACWO လို့ ခေါ်တဲ့ Anterior Chamber Work Out နည်းနဲ့ သွေးတွေကို စုပ်ထုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြဿနာက စုပ်ထုတ်ပေမယ့် သွေးစိမ့်ထွက်မှုက ရှိနေနိုင်တယ်။ မျက်လုံးအိမ်က အပိတ်စနစ် (Close System) ဆိုတော့ တိကျတဲ့ Volume ရှိတယ်။ သူ့ထဲကို သွေးတွေဝင်လာတဲ့အခါ Volume များလာပြီး ဖိအား (Pressure) ကလည်း တက်လာပါတယ်။ အဲဒီလို Intraocular Pressure တက်လာတာကို ရေတိမ်ရောဂါ (Glucoma) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မေး. ဒါကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကုသမှုပေးနိုင်ပါသလဲဆရာ။
ဖြေ. မျက်လုံးအိမ်ထဲ သွေးတွေဝင်လာတဲ့အခြေအနေ Hyphema ဆိုရင်တော့ ACWO ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ သွေးတွေကိုစုပ်ထုတ်ပါမယ်။ ပြီးရင် Adona လို သွေးတိတ်ဆေးတွေ ပေးထားပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက ရေတိမ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် Diamox လိုဆေးမျိုးကိုပေးပါတယ်။ မျက်စိကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာက ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ရောင်ရမ်းမှုကျဆေး (Anti-imflammatory Eye Drop) တစ်မျိုးမျိုးကို ပေးထားရပါတယ်။
မေး. နောက်ပိုင်းမှာကော ဘယ်လိုဆက်လက်ကုသမှု ပေးရပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. တကယ်လို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး သွေးဝင်တဲ့အပိုင်းက Vitreous Cavity မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် မျက်စိအမြင်လွှာသွေးကြောတွေ (Retina Vessels) ကနေ သွေးတွေပန်းထွက်လာမယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်း စောစောကလိုပဲ Adona လို သွေးတိတ်ဆေးတွေ ပေးထားပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက Volume တက်လာတာကြောင့် ရေတိမ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ရေတိမ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် Diamox လို ဆေးမျိုးကို ပေးပါတယ်။ မျက်စိကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာက ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ရောင်ရမ်းမှုကျဆေး (Anti-imflammatory Eye Drop) တစ်မျိုးမျိုးကို ပေးထားရပါတယ်။ ဒါကို ယေဘုယျအားဖြင့် ခြောက်လလောက် စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ ခြောက်လစောင့်ကြည့်လို့မှ မသက်သာဘူးဆိုရင် Vitrectomy နည်းနဲ့ကုသရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေကျရင် မျက်လုံးအိမ်ကတင်းပြီး ရေတိမ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် Vitrectomy နည်းနဲ့ ကုသမှုကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။ ဘာမှ ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ ခြောက်လလောက် စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။
စောင့်ကြည့်နေတဲ့ခြောက်လအတွင်းမှာ မျက်စိက ပိုပြီးမမြင်နိုင်ပါဘူး။ မှုန်ဝါးဝါးပဲဖြစ်နေမှာပဲ။ ဒီခြောက်လအတွင်းမှာ မျက်စိမြင်လွှာ သွေးကြောတွေက ပန်းထွက်တဲ့ သွေးတွေက ရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စုပ်သွားနိုင်တယ်။
စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ခြောက်လအတွင်းမှာ မျက်စိက ပိုပြီး မမြင်နိုင်ပါဘူး။ မှုန်ဝါးဝါးပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ဒီခြောက်လအတွင်းမှာ မျက်စိမြင်လွှာ သွေးကြောတွေက ပန်းထွက်တဲ့ သွေးတွေက ရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စုပ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်ဘဲနဲ့ မျက်စိကို မခွဲစိတ်ပါဘူး။ မျက်စိမြင်လွှာက သိပ်တင်းလွန်းနေရင်၊ လူနာက အဝေးကြီးကလာရပြီး ဆေးရုံကို ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင် တော့ခွဲစိတ်ကုသပေးပါတယ်။
Related Items:Eye, Eye Care, Featured
အသက်ကြီးသူတို့တွင် အဓိကဖြစ်တတ်သည့် မျက်စိခြောက်သွေ့ခြင်း (Dry Eye)